भक्तपुर, ९ साउन, भक्तपुरको चारदोबाटोमा हिजो बेलुकी भएको सवारी दुर्घटनामा कार चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भक्तपुरको सूर्यविनायक बस्ने सिन्धुलीका ४७ वर्षीय रमेशराज राउत रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको उपचारको क्रममा नागरिक अस्पताल गठ्ठाघरमा उपचारको क्रममा हिजो बेलुकी सवा ८ बजे मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा घाइते भएका कारमा सवार रमेशराजका १८ […]
२५ साउन, काठमाडौं । प्रजातान्त्रान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा दुर्गा सुवेदीको आत्मवृत्तान्त ‘विमान विद्रोहः एउटा राजनीतिक अपहरणको वयान’ बजारमा आएको छ । पुस्तकका लेखक दुर्गा सुवेदी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका पति हुन् । विसं. २००३ सालमा धनकुटामा जन्मिएका सुवेदी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका चर्चित नाम हुन् । पञ्चायती सत्ताविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र संघर्षलाई सहयोग पुर्‍याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको […]
कतार एयरवेज १८ औँ एसियाली खेलकुदको प्रेस्टिज पार्टनर तथा आधिकारिक एयरलाइन्स
कतार एयरवेज १८ औँ एसियाली खेलकुदको प्रेस्टिज पार्टनर तथा आधिकारिक एयरलाइन्स रहने भएको छ । १८ औँ एसियाली खेलकुद महोत्सवमा ४५ सहभागी राष्ट्रका खेलाडीहरुलाई जकार्ता तथा पलेम्बाङमा निम्त्याई प्रतिष्ठित पुरस्कारहरुको लागि प्रतिस्पर्धा गराउने छ । रुसमा भएको २०१८ फिफा विश्वकपको आधिकारिक पार्टनर तथा एयरलाइन्स पनि कतार एयरवेज नै रहेको थियो । कतार राज्यको यस राष्ट्रिय […]
संघीय संसद राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको कार्यविधि पारित
काठमाडाैैं – संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको कार्यविधि पारित भएको छ । समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यविधि परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । सचिवालयद्वारा प्रस्तावित कार्यविधि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफसहित पारित गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य हरिचरण शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिमा पत्रकारहरुलाई बैठकमा जान रोक लगाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले […]
फेरियो भरतपुर र नारायणगढ ! यसरी हुँदैछ व्यवस्थित
२५ साउन, चितवन । एक समय मानिसहरुलाई लाग्थ्यो, नारायणगढ बजार झर्न नपरे पनि हुन्थ्यो । साँघुरो सडक, गुडेका रिक्सा र ट्याम्पो, म्याजिकको दादागिरी । सडक पेटीमा विस्कुन सुकाए झै सामान राखेर ब्यापार गर्नेहरु । कपाल काट्ने त्यही, जुत्ता पालिस लगाउने पनि त्यही, दुर्गन्ध उतिकै । सर्वसाधारण नागरिकलाई नत फुटपाथमा हिँड्न सहज थियो, नत सडकमा यात्रा […]
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड भदौ तेस्रो साता भारत जाने
२५ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भदौ तेस्रो साता भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । उनी पाँच दिने भ्रमणका क्रममा भदौ २२ गते अर्थात सेप्टेम्बर ७ तारिखमा भारत जानेछन् । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले हालै मात्र भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । भ्रमणका क्रममा भारतीय […]
२५ साउन, काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वरले बुधबार लागूऔषध गाँजा बिक्री गर्दै गरेको सूचनाको आधारमा शान्तिनगर क्षेत्रबाट सरोज लामालाई पक्राउ गर्‍यो । ब्रिटिस फाइनान्स कम्पनीमा सेक्यूरिटी गार्डको रुपमा कार्यरत लामाको पर्दा पछाडिको धन्दा गाँजाको बिक्री वितरण गर्नु भएको खुल्यो । उनले आफ्नो सेवाग्राही बानेश्वर क्षेत्रका विभिन्न होस्टलहरुमा बस्ने विद्यार्थीदेखि कलेजमा पढ्नेसम्म भएको बयान […]
जानिराखौ, सधै जवान देखिन कस्ता खानेकुरा खाने त ?
हामी आफ्नो अनुहारको छालालाई कसरी चम्किलो बनाउँने भनेर चिन्तामा रहन्छौं । अनुहार चम्किलो र सफा बनाउँने बहानामा हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्छौ । हामीले केहि खानेकुरामा ख्याल गर्ने हो भने अनुहार सुन्दर बनाउँन किरिम पाउँडर लगाउँनै पर्दैन । ओखर र सोयाबिनः ओखर तथा सोयाबिनमा पाईने ओमेगा–३ फ्याट्टी एसिडलगायत तत्वले छालालाई सुक्खा हुन दिँदैन । यस्तो फ्याट […]
एसियन गेम्सको तयारीमा रहेको नेपाली युवा टोलीले दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दै
काठमाडौँ । एशियाली खेलकूदको तयारीस्वरुप थाइल्याण्डमा प्रशिक्षण लिइरहेको नेपाली युवा फूटबल टोलीले आज त्यहाँको यू–२३ टोलसँग दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दैछ । थाइल्याण्डको यू–२३ टोलीसँग आज दिउँसो बैंककस्थित थाम्मासत युनिभर्सिटी मैदानमा खेल्ने अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा)ले जनाएको छ । यसअघि मङ्गलबार भएको खेलमा नेपाली टोली त्यहाँको पुलिस टेरो क्लबसँग १–० ले पराजित भएको थियो । […]
यस्ता छन् ‘ग्रीन टी’ पिउनुका फार्इदासंगै अपत्यारिला बेफार्इदा
एजेन्सी । तपाईले ग्रीन टी को फाइदाहरूको बारेमा थुप्रै जानकारी राख्नु भएकै होला र दिनहुँ यसको सेवन गर्दै आउनु भएको पनि होला । हरेक चीजको फाइदा र बेफाइदा दुवै रहेको हुन्छ तर तपाई ग्रीन टी को प्रयोगले पनि नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर अचम्म पर्न सक्नुहुन्छ । जुन तपाईको स्वास्थ्यको लागि निकै खतरनाक साबित […]